Ọtụtụ n'ime anyị anọwo na-enwe nkụda mmụọ banyere adịkwa oké ọnụ ahịa foto site na igwefoto dijitalụ, ekwentị, kọmputa ike mbanye, wdg Mgbe ihu nke a ụdị ọdachi, ọtụtụ ndị mmadụ ga àgwà nke nanị iji hụ na ihe ngwọta na internet na-azụ furu efu photos. Ee, ihe ngwọta ga-a pụrụ ịdabere na foto mgbake usoro. O di nwute na ọtụtụ n'ime foto mgbake omume na internet mkpa ga-akwụ ụgwọ na ọ bụ mgbe ike ka i mara ma gị ego gị bụ uru na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ tupu i kpebie ịzụta ya.
Dabara nke ọma, e nwere na ka ụfọdụ foto mgbake omume nke na-ma bara uru na kpam kpam free. Lee, m na-aga ka nwere ike ikwu ụfọdụ dị ike free foto mgbake omume maka gị.
Ndepụta nke free foto mgbake mmemme:
Top 3: ZAR (Zero Assumption Iweghachite)
Top 2: PC soja Njikwa Iweghachite
Cheta na: Mgbe niile mac foto mgbake omume mkpa iji kwụọ ụgwọ maka mgbake, niile free foto mgbake ngwaọrụ ke ndepụta dabeere na Windows os.
Mgbe ọ bụla ị na-agbalị Google a free foto mgbake omume ma ọ bụ a free data mgbake omume na internet, Recuva bụ mgbe n'elu nkwanye si ndị ọrụ ndị ọzọ n'ihi na nke mfe na-eji interface.
Ọmarịcha scanning ọsọ nke Recuva amama foto gị na mgbake a mkpirikpi ma adaba njem. Ma e wezụga foto mgbake, ọ naputa fọrọ nke nta nile di iche iche nke faịlụ site na kọmputa gị, nakwa dị ka igwefoto dijitalụ, kaadị ebe nchekwa, flash mbanye, wdg
1 Ọ bụ a kpam kpam free omume na ebube ngwa ngwa scanning ọsọ;
2 Recuva ka pụrụ iche na-agbake ọrụ maka foto, music, akwụkwọ, video, abịakọrọ faịlụ na ozi ịntanetị;
3 Ịnwere ike ihuchalu hụrụ photos tupu agbake ha;
4 The ekwu, nke hụrụ faịlụ ga-gwara: magburu onwe ma ọ bụ unrecoverable;
5 Recuva bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile Windows nsụgharị: Windows 8, Windows 7, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows XP na Windows 2003 Server.
PhotoRec bụ pụrụ iche free foto mgbake omume na-agba ọsọ na Windows OS, OS X, DOS na DOS. N'akụkụ ụfọdụ, PhotoRec bụ ọbụna mma karịa Recuva. N'ihi na ya isi DOS-dị ka interface na ime, ọ bụ ihe kasị mma free foto mgbake usoro ihe omume ọkà kọmputa ọrụ. Nwere ike ọ gaghị adị otú mfe na-eji n'ihi na ọtụtụ kọmputa owners.PhotoRec bụ pụrụ iche free foto mgbake omume na-agba ọsọ na Windows OS, OS X, DOS na DOS. N'akụkụ ụfọdụ, PhotoRec bụ ọbụna mma karịa Recuva. N'ihi na ya isi DOS-dị ka interface na ime, ọ bụ ihe kasị mma free foto mgbake usoro ihe omume ọkà kọmputa ọrụ. Nwere ike ọ gaghị adị otú mfe na-eji n'ihi na ọtụtụ kọmputa nwe.
1 tụnyere ndị ọzọ na foto mgbake omume, PhotoRec na-arụ ọrụ ezi na ọtụtụ OS na ahịa: Windows OS, OS X, DOS na DOS;
2 Ọ na-akwado mgbake nke ihe karịrị 20 faịlụ na ụdị;
3 Ọ bụ ike naghachi a ehichapụ nkebi. Fọrọ nke nta dịghị free foto mgbake omume nwere a funtion.
N'ezie, ZAR bụ a na-akwụ ụgwọ ihe omume. The free version nke ZAR naanị-enye gị ohere iji naghachi photos. Ma free foto mgbake ọrụ nke ZAR bụ otu nke kasị mma nhọrọ maka gị. Ọ na-enyocha miri nnọọ emi na ọtụtụ data mgbake omume. Otú ọ dị, n'ihi na nke miri iṅomi, ọ na-ewe ogologo oge ịgụ isiokwu oge na ndị ọzọ free foto mgbake omume na ndepụta. Na ị pụrụ ọbụna kwụsịtụ n'oge scanning. Nke a pụtara, ọ bụrụ na ngwaọrụ gị na-emerụ ma ọ bụ na-apụghị ghọtara site na kọmputa, ZAR bụ a mma nhọrọ karịa ndị ọzọ omume.
1 ọ na-amata ihe draịva karịa ndị ọzọ omume, n'agbanyeghị ngwaọrụ na-emerụ ma ọ bụ na-apụghị ghọtara site kọmputa;
2 Ọ na-enyocha mbanye miri nnọọ emi na ndị ọzọ omume na-eme;
3 Ọ na-enye ọtụtụ ahaziri nzacha na "Advanced nhazi";
4 I nwere ike ịzọpụta scanning N'ihi maka mgbake mgbe e mesịrị, mgbe ọtụtụ free foto mgbake omume na-adịghị ọrụ a.
5 Omume ọma-e nchọgharị atụmatụ
Get ZAR (Zero Assumption Iweghachite)
Top 2: PC soja File Iweghachite
PC soja bụ ihe ọzọ dị mfe ma free foto mgbake omume. Ọ enyocha kwa na naputa na ị na disk ebe photos nanị e-ehichapụ ngwa ngwa. Ọ na-kere maka ndị ọrụ nwere obere oru ihe ọmụma, n'ihi na mkpa ka ị mara ihe dị iche n'etiti ezi uche na nke anụ ahụ mbanye na-amalite ya. Ọ bụ ezie na scanning engine nke PC soja dị ike, ọ na-ewe ọtụtụ minit ike iṅomi gị mbanye na ọ bụ adịghị ike iṅomi a emerụ mbanye.
1 Ọ naputa ehichapụ photos si ma ezi uche na nke anụ ahụ draịva;
2 Ọ naputa photos ọbụna mgbe a nkụnye eji isi mee ntinye bụ agaghịkwa dị;
3 Ọ chọtara na-enyocha kwa partitions na-akpaghị aka ọbụna mgbe buut oru ma ọ bụ abụba e ehichapu ọ bụ mebiri emebi;
4 Ọ na-enyere gị aka naputa faịlụ na mbụ na oge na ụbọchị stampụ
Get PC soja File Iweghachite
PicaJet Photo Recovery free-enyere gị aka naghachi ehichapụ ma ọ bụ formatted dijitalụ foto site na media kaadị ma ọ bụ ruo ji gị igwefoto dijitalụ, nakwa dị ka site na kọmputa ike mbanye. Gịnị na-eme ya otú pụrụ iche bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi furu efu foto site na igwefoto dijitalụ, i kwesịrị ijide n'aka na kaadị ma ọ bụ mkpisi bụ na igwefoto mere na usoro ihe omume nwere ike ịchọpụta ya.
1 The interface nke usoro ihe omume bụ mgbagwoju anya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iyi ihe ọhụrụ, PicaJet Photo Recovery Free ga-abụ ihe ị chọrọ;
2 E jiri ya tụnyere ndị ọzọ Photo mgbake omume, PicaJet Photo Recovery Free bụ ihe dị ka dijitalụ foto management na oyiyi nchekwa data software.
Get PicaJet Photo Recovery Free
Ọ bụrụ na ị bụghị ọkà kọmputa ọrụ na onye ị chọrọ naputa foto gị na ngwa ngwa, Recuva bụ gị mma nhọrọ.
N'ihi na ndị na chọrọ iji naghachi a foto na ngwaọrụ na-agba OS X, Linux ma ọ bụ ọbụna DOS, PhotoRec bụ n'ezie bara uru. Ị ga-mkpa ịmata a ntakịrị banyere isi DOS ọrụ.
Ọ bụrụ na gị photos furu si a emerụ mbanye, Aga m atụ aro ka ị a lee anya na ZAR. Ọ bụ ezie na scanning nke a usoro bụghị otú ngwa ngwa, ọ Aga akpatre ịchọpụta gị furu efu foto na-agbapụta ha maka gị.
PC soja na PicaJet nwekwara nhọrọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi foto site na ezi uche mbanye ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ ka ndị ọzọ mgbalị.
Photo Recovery Maka iPhone ma ọ bụ akporo ekwentị
Ọ bụrụ na ị photos furu site na iOS ngwaọrụ dị ka iPhone na iPad ma ọ bụ ihe gam akporo ngwaọrụ, ọtụtụ foto mgbake omume na ahịa ga-enweghị enyemaka. Ma echegbula, Wondershare ga-egosi gị zuru okè ngwọta maka iPhone foto mgbake nakwa dị ka Android foto mgbake.
Wondershare Dr.fone maka iOS (iPhone Data Recovery bụ a pụtara iPhone data mgbake ngwa na-enyere gị iji naghachi furu efu photos, videos, SMS, na kọntaktị na ọtụtụ ụdị faịlụ ndị ọzọ si ma iPhone ngwaọrụ na ya iTunes ndabere na kọmputa gị. Ọ bụ maa-eduga iPhone data mgbake omume na ahịa na zọpụta ọtụtụ ọrụ 'ndụ ma e ukwuu too site na ha.
Wondershare Dr.Fone for Android (Android data mgbake) bụ a pụtara iPhone data mgbake ngwa na-enyere gị iji naghachi furu efu photos, videos, SMS, na kọntaktị na ọtụtụ ụdị faịlụ ndị ọzọ si ma iPhone ngwaọrụ na ya iTunes ndabere na kọmputa gị. Ọ bụ maa na-eduga iPhone data mgbake omume na ahịa na zọpụta ọtụtụ ọrụ 'ndụ ma e ukwuu too site na ha.
Olee otú Igosi mpụga ike mbanye nkebi Iweghachite
Olee otú Naghachi nso nso-ehichapụ faịlụ
Top 5 free MKV Ntụgharị
Download Ịtụnanya Mavericks akwụkwọ ahụ aja maka Free